Iibso Muuqaalada YouTube - YTpals
Waa maxay faa'iidooyinka iibsashada aragtida YouTube-ka?
Waxay dadka ku dhiirigeliyaan inay daawadaan Fiidyowgaaga
Muuqaalada waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta Qiimaynta Mashiinka Raadintaada
100% Dammaanad Dammaanad ama Dib Lacagtaada
100% waa la hubiyaa in aan la soo saarin Video haddii la qaboojiyey
Natiijooyinku waxay bilaabi doonaan inay muuqdaan 24-72 Saacadaha
Kala Bixi Muuqaallo Isugeyn Muuqaalo Badan (1,000 Muuqaalo Fiidiyaha Ugu Yar). Dalbo Muuqaalada 10,000 iyo Kala Bixida 1 10 Fiidiyaha.
Siyaabaha La Xaqiijiyay ee Lagu Iibsado Muuqaallada YouTube 2022
Youtube waa goob internet ka ah oo si weyn loo jecel yahay halkaas oo in ka badan bilyan isticmaale ay soo galiyaan malaayiin saacadood oo xog ah maalin kasta. Laga soo bilaabo nuxurka hal-abuurka leh, casharrada, fiidyaha muusiga,' sida wax loo hago,' faallooyinka alaabada ilaa fiidyaha aan feerka laga qaadin, YouTube waxa ay leedahay waxyaabo badan oo cajiib ah oo ay dadku jecel yihiin.
Waa goobta ugu habboon ee lagu soo bandhigo kartidaada, lagu faafiyo wacyiga, saameyn ku yeelato ama kor loogu qaado astaantaada. Marka laga reebo in uu yahay bogga ugu sarreeya ee wax ka qora, YouTube waa kanaalka ay door bidayaan ganacsiyada iyo kuwa raadinaya lacag. Iyada oo ku xidhan cabbirada sida tirada aragtiyaha, kuwa jecel, iyo macaamiisha aad haysato, waxaad abuuri kartaa raasamaal. Faa'iidooyinka badan ee noqoshada YouTuber caan ah ayaa ah sababta ay dadku u iibsadaan muuqaallada YouTube.
Haddii aad raadinayso inaad bilowdo kanaalkaaga YouTube 2022, iibsashada aragtiyadu waxay kaa caawin doontaa dardargelinta safarkaaga inaad noqoto YouTuber guuleysta. Marka ay timaado iibsashada aragtiyaha YouTube, dhammaan bogagga ama iibiyeyaasha looma wada sinneen. Ogaanshaha sida loo iibsado aragtiyaha keenaya natiijooyinka aad raadinayso ayaa muhiim u ah hirgelinta istaraatiijiyadaada YouTube ee 2022.
Maxaa lagu tiriyaa aragtida YouTube ahaan?
Kahor intaadan raadin goobta ugu fiican iibso aragtida YouTube, Fahamka waxa lagu tiriyo aragti ahaan waa muhiim. YouTube waxay tirisaa aragtida iyadoo ku xiran shuruudahan:
Isticmaaluhu wuxuu si ula kac ah u gujiyaa fiidiyowga si uu u daawado fiidiyowga.
Isticmaaluhu wuxuu daawadaa fiidiyowga ugu yaraan 30 ilbiriqsi.
Aragtidaada ayaa lagu xisaabin doonaa markaad daawato fiidyahaaga YouTube, kaliya haddii aad aragto hal ama laba jeer. Soo kicinta joogtada ah ee bogga si si macmal ah kor loogu qaado aragtida looma xisaabin doono aragti ahaan.
YouTube sidoo kale waxay xisaabin doontaa aragti haddii aad ku qaadato in ka badan 30 ilbiriqsi daawashada muqaalka laakiin ka dhex boodo. Daawashada fiidiyowga in ka yar 30 ilbiriqsi looma xisaabin doono sida muuqaal YouTube ah. Xadka daawashada ee 30 ilbiriqsi arrimood sababtoo ah tani waxay ka caawinaysaa goobta in la go'aamiyo in fiidyaha la soo gelin karo. Fiidyowyada wax ka yar 30 ilbiriqsi sida caadiga ah lama lacag gelin karo.
Iyadoo aragtiyadu aanay ahayn kuwo gaar ah, dib-u-booqasho kasta iyo dib-u-eegis kasta ayaa sidoo kale loo tiriyaa sidii aragtiyo. Dashboard-ka falanqaynta YouTube wuxuu soo bandhigayaa daawadayaasha gaarka ah haddii aad rabto inaad ogaato cabbirkan.
Aragtida soo noqnoqda ee dadka kale waxa kaliya loo tirin doonaa aragtiyo ilaa xad ah. YouTube ma qeexin xadka uu ku joojinayo tirinta aragtiyada. Khubarada YouTube waxay aaminsan yihiin in madalku tiriyo ilaa afar ama shan aragtiyood maalintii laakiin waxay joojiyaan cusboonaysiinta tirinta aragtida ka dib lambarkan. In kasta oo ay caadi tahay in lagu fekero in helista xubnaha kooxda, asxaabta, ama qoyska si ay u daawadaan fiidiyowyada si isdaba joog ah ay kor u qaadi doonto aragtida, tani ma dhici karto.
Haddii aragtiyadu ay yihiin 'macmal,' software YouTube ayaa ogaanaya iyaga oo tirtiraya. Kuwani waa calamadaha dhibaatada YouTube-ka u ah:
Dib u cusboonaysiinta si joogto ah - Haddii hal isticmaale uu si joogto ah u cusboonaysiinayo fiidiyowga si uu u keeno tirooyinka, looma xisaabin doono aragtiyo dheeraad ah.
Viruses – Malware loo qorsheeyay in lagu waxyeeleeyo shabakada, serverka, ama kombiyuutarka.
Autoplay – Fiidiyow loo dejiyay inuu si toos ah ugu ciyaaro degel kasta looma xisaabin doono aragti ahaan.
Faallooyinka spamka - Haddii isticmaaluhu ka tago faallooyinka spamka, YouTube uma xisaabin doono saacaddooda muuqaal ahaan.
Fiidiyowga La Dulmaray – Iyadoo xukunka haddii fiidyaha ku xidhan loo tiriyo sidii aragtiyadu is khilaafayaan, YouTube waxa laga yaabaa inaanay tirin fiidyaha ku guntan bogga shabakadda oo loo dejiyo in si toos ah loo ciyaaro. Haddii ay dhacdo in fiidyowga ku xidhani uu qayb ahaan qaado, taasoo ka dhigaysa isticmaaluhu inuu soo cusboonaysiiyo fiidyaha dhawr jeer, aragtiyadan sidoo kale lama tirin doono. Fiidiyowga ku dhex jira waa inuu si buuxda oo nadiif ah u shubaa, daawaduhuna waa inuu si ula kac ah u gujiyaa fiidiyowga YouTube si uu ugu tiriyo muuqaal ahaan.
Immisa jeer ayaa aragtiyaha la cusboonaysiiyaa?
In kasta oo macluumaadkan aanu daabicin YouTube, dadka khibradda leh ee YouTubers waxay og yihiin in aragtiyaha aan isla markiiba la cusboonaysiin. Caadi ahaan, aragtida YouTube waa la cusboonaysiiyaa 24 ilaa 48 saacadood kasta.
YouTube Live: Aragtiyadan miyay tirsanayaan?
YouTube kaliya kuma ogola dadka inay soo galiyaan muuqaalo hore loo duubay balse waxa uu leeyahay muuqaal muuqaal toos ah. Tani waxay u ogolaanaysaa isticmaalayaasha inay daawadaan fiidyaha baahinta tooska ah wakhtiga dhabta ah. Aragtida tooska ah waxaa sidoo kale loo tiriyaa sida muuqaallada YouTube, oo la mid ah aragtida fiidyaha hore loo duubay. Si la mid ah fiidiyowyada horay loo duubay, tirinta muuqaalka fiidyaha tooska ah ayaa la hagaajin doonaa marka isticmaalayaashu
Si joogto ah u cusboonaysii boggaga
Daawo muuqaalka in ka yar 30 ilbiriqsi
Isla mar ahaantaana u isticmaal isla cinwaanka IP-ga ee aaladaha kala duwan.
Fur daaqadaha kala duwan markaad daawato muuqaalka.
Yaa u baahan inuu iibsado muuqaallada YouTube?
Iibsashada aragtiyaha YouTube iyo kuwa raacsan waxay kaa caawin karaan inaad gaarto yoolkaaga inaad noqoto shaqsi internet ah. Marka laga reebo tan, xirfado kala duwan ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara iibsashada aragtida YouTube iyo kuwa raacsan, sida:
Muusikada - Fiidiyowyada muusiga ayaa ah nooca ugu caansan ee waxyaabaha ku jira YouTube. Haddii aad tahay muusikiiste raba inuu u soo bandhigo kartidaada gaarka ah aduunka, ma jirto meel ka fiican Youtube. Markaad lacag ku bixiso daawashada, waxaad kor u qaadi kartaa ka-qaybgalka fiidiyowyadaada oo waxaad heli kartaa bandhig wanaagsan. Tani waxay kuu furi kartaa fursado badan oo aad ku ballaarin karto gaadhistaada oo aad kasbato caannimada internetka.
Khabiirada SEO iyo abuurayaasha nuxurka - Khubarada SEO-ga iyo hal-abuurayaasha nuxurka leh waxay ka faa'iideysan karaan siyaabo badan iyagoo iibsanaya aragtida YouTube iyo saldhigga macaamiisha. Tani waxay kaa caawin kartaa inay hagaajiyaan xeeladahooda nuxurka si ay ugu darajo sareeeyaan Google ama YouTube.
Tuuji streamers - Twitch wuxuu diiradda saarayaa baahinta fiidiyowyada tooska ah. Kuwa raadinaya inay ku guuleystaan ​​nichekan, kobcinta daawashada YouTube waa hab la xaqiijiyay oo lagu kordhinayo daawashada dabiiciga ah.
Brands - Tiro sii kordheysa oo ganacsiyo iyo suuq-geyneed ayaa maalgashanaya suuq-geynta fiidiyowga taas oo la caddeeyey inay bixiso soo-celinta sare ee maalgashiga suuq-geynta. Fiidiyowyadu waxay caan ku yihiin awoodda ay u leeyihiin inay kor u qaadaan ka-qaybgalka macaamiisha, kor u qaadaan soo celinta summada oo ay horumariyaan heerarka beddelka. Dhab ahaantii, in ka badan 70 boqolkiiba dukaameeysatada ayaa wax iibsada ka dib markay daawato muuqaal ku saabsan YouTube. Noocyada raadinaya inay kor u qaadaan iibkooda iyo ka qaybgalka macaamiisha ayaa ka faa'iidaysan doona maalgelinta aragtida YouTube.
Marka laga reebo xirfadahan, saameeyayaasha, dib-u-eegayaasha alaabta, majaajilada, xirfadlayaasha maaliyadda, iyo macallimiinta waxay kobcin karaan ganacsigooda oo ay dhisi karaan joogitaan internet oo xooggan iyagoo iibsanaya aragtida YouTube.
Maxay tahay sababta YouTube u arko muhiim
Sida laga soo xigtay Statista, YouTube waxay haysataa 1.86 bilyan oo isticmaale adduunka oo dhan 2021. Balaayiin saacadood oo muuqaal ah ayaa maalin kasta daawadayaasha kooxaha da' kasta leh. Daawadeyaashu waxay ku daawadaan fiidiyowyada YouTube qalabyo badan, oo ay ku jiraan laptops, mobils, tablets, TV ku xidhan, iyo miisaska gacanta. Celcelis ahaan wakhtiga ay ku qaataan YouTube waa ilaa 41 daqiiqo.
Iyada oo in ka badan afar-meelood saddex meelood oo dadka Maraykanka ah ay ku xidhan yihiin YouTube, madalku waa meesha ay u socdaan suuqlayda, ganacsiyada, iyo shakhsiyaadka raba inay soo bandhigaan kartidooda ama caan ku noqdaan. Sahan lagu sameeyay, 71 boqolkiiba suuqgeeyayaasha B2B waxay maalgashadaan abuurista fiidiyowyada YouTube si ay kor ugu qaadaan wacyiga astaanta, u kasbada kuwa raacsan oo kor loogu qaado heerka beddelka. Caalamka, 40 boqolkiiba macaamiishu waxay sheegaan inay wax iibsadeen ka dib markay daawadeen muuqaal ku saabsan YouTube.
Sababaha ugu sarreeya ee ay daawadayaashu u daawadaan fiidiyowyada YouTube waxaa ka mid ah:
Cusboonaysiinta alaabta/adeegyada cusub ee noocyada
Haddi aad rabto in aad kor u qaaddo meheraddaada, aad tustid aduunka xirfadaha iyo kartida aad leedahay, ama aad rabto in aad lacag ku kasbato YouTube, hubinta in fiidyahaagu gaadho meel balaadhan waa muhiim.
Sababaha ugu sarreeya ee lagu iibsado aragtida YouTube
Qiyaasta ka-qaybgalka YouTube sida muuqaalada, is-diiwaangelinta, iyo waxa jecel waxay ka tarjumaysaa sida daawadayaashu ula falgalaan fiidyahaaga. Muuqaallada YouTube waxay tixraacaan tirada jeer ee fiidyahaaga YouTube-ka la daawado. Aragtida YouTube waa tilmaame muhim ah oo muujinaya caannimada guud ee fiidyahaaga YouTube.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego in ka badan 500 saacadood oo ka kooban muuqaal ah ayaa lagu shubaa daqiiqad kasta YouTube, qabashada dareenka daawadayaasha waa caqabad.
Waa kuwan sababo kale oo aad ku iibsan karto aragtiyaha YouTube:
Ku darajo sare YouTube iyo Google - Aragtidu waa muhiim si kor loogu qaado darajada fiidyahaaga YouTube iyo matoorada raadinta sida Google. Qiimaynta sare ee boggaga raadinta iyo YouTube waxay kaa caawinaysaa inay fiidyahaaga ka dhigto mid u muuqda kuwa raadinaya waxyaabaha la midka ah.
YouTube wuxuu u shaqeeyaa sida Google u sameeyo. Isticmaalayaasha ayaa raadiya ereyada muhiimka ah, natiijooyinka fiidyowga waxaa lagu soo bandhigay YouTube. Algorithm-ka YouTube ayaa go'aamiya fiidyowga soo bixi doona iyadoo lagu salaynayo arrimo badan oo darajo ah sida tirada macaamiisha, aragtiyaha, jecel yihiin, faallooyinka, iyo saamiyada. Asal ahaan, algorithm-ka YouTube-ka wuxuu raadiyaa fiidiyooyo khuseeya kuwaas oo leh ka-qaybgalka ugu sarreeya (aragtiyada, jeceylka, macaamiisha) si loo qiimeeyo natiijooyinka bogga koowaad. Tani waxay ka dhigan tahay in badan oo tirada aragtiyada aad u leedahay fiidyahaaga, ay u badan tahay in fiidyahaagu uu ka sareeyo natiijooyinka raadinta. Xeeladda ugu fiican ee kor loogu qaado aragtida, gaar ahaan marka aad bilow tahay, waa in aad bixiso aragtida.
Hel jacayl badan - Mid ka mid ah su'aalaha caadiga ah ee dadka hadda ka bilaabay YouTube waxay la xiriiraan muhiimada aragtiyaha jecel. Haddii aad ka doodayso inaad iibsato aragtiyo ama aad jeceshahay si aad kor ugu qaaddo sumcadda iyo darajada, ogow inaadan heli karin wax-jeclow la'aanteed. Si kale haddii loo dhigo, daawadayaashaadu waa inay daawadaan muuqaalka marka hore si ay u awoodaan inay jeclaadaan. Suuqgeeyayaasha iyo YouTubers waxay iibsadaan aragtiyada YouTube sida tallaabada ugu horreysa ee lagu kasbado dad badan oo jecel iyo kuwa raacsan.
Dhis macaamiisha macaamiisha - Helitaanka dad badan si ay u daawadaan fiidiyowgaaga waa habka ugu wanaagsan ee lagu dhisi karo saldhigga macaamiishaada. Inta badan tirada macaamiisha kanaalkaaga YouTube, waa ay ka saraysaa darajada natiijooyinka raadinta YouTube.
Lacag ka samee fiidiyowyadaada - Dad badan oo YouTuber ah ayaa dakhli qurux badan ka kasba barnaamijka iskaashiga YouTube. Si aad ugu biirto barnaamijka, waxaad u baahan tahay inaad lahaato 1,000 macaamiil ah, fiidiyowyadaaduna waa in la daawaday 4,000 saacadood laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay. Marka fiidyowyadaadu yeeshaan aragtiyo badan iyo macaamiilayaal, waxaad awood u yeelan kartaa aaladaha YouTube sida:
Most Google - Google AdSense waa hab fudud oo lacag lagu sameeyo adiga oo xayeysiis ku dhejinaya fiidyahaaga YouTube. Shabakadda Google ayaa isku xirta ganacsiyada doonaya in ay xayeysiis u galiyaan kanaalada caanka ah ee YouTube iyo YouTubers ee doonaya in ay ka ganacsadaan kanaalkooda.
Marka loo eego hal qiyaas, 20,000 aragti ayaa kaa caawin kara inaad samayso $28 ilaa $47 maalintii. Tani waxay u tarjumaysaa $460 ilaa $769 bishii iyo $5,600 ilaa $9,353 sanadkii.
Iibka alaabta - Markaad lacag ku bixiso daawashada, waxaad noqon kartaa lammaane YouTube kuu oggolaanaya inaad ku iibiso laba iyo toban shay oo baayacmushtar ah akoonkaaga YouTube. Waxa kale oo aad ku xayeysiin kartaa alaabtaada kanaalkaaga YouTube.
Suuq-geynta suuqa - Haddii kanaalkaaga YouTube uu leeyahay aragtiyo tiro badan, waxay tusinaysaa ganacsiyada inaad awood u leedahay inaad dadka kale saameyn ku yeelato inay go'aan iibsadaan. Ganacsiyadu waxay bixiyaan YouTubers-ka caanka ah si ay u xayeysiiyaan alaabtooda.
Kordhi aragtiyaha dabiiciga ah - Sababta ugu muhiimsan ee lagu iibsado aragtida YouTube waa in kor loo qaado aragtida organic, jecel, iyo macaamiisha. Marka aad tahay bilawga, haysashada sacab muggiis oo aragtiyo ah iyo macaamiishu waxay la macno tahay in fiidyahaagu aan la dareemin. Helitaanka dadka si ay u daawadaan fiidiyowgaaga waxay qaadan doontaa waqti iyo dadaal badan. Dadka intooda badan waxay u janjeeraan inay daawadaan muuqaalo hore u ahaa fayras ama la daawaday kumanaan jeer. Iibka aragtiyaha YouTube waxay kaa caawinaysaa inaad hesho dardarta aad u baahan tahay si aad u soo jiidato aragtiyaha organic, jecel yahay, iyo macaamiisha.
Sifee istaraatiijiyadaada YouTube - Markaad kordhiso tirada aragtida dabiiciga ah, waxaad isticmaali kartaa mitirka si aad u nadiifiso istaraatiijiyada fiidyaha YouTube. Markaad la socoto aragtiyaha, waxaad si fiican u fahmi kartaa haddii sawirka thumbnail-kaagu uu waxtar lahaa, cinwaanku yahay mid soo jiidasho leh, iyo in nuxurkaagu uu mudan yahay in la daawado.
Dhis kalsoonida - Dadku waxay door bidaan inay daawadaan fiidiyowyo ay daawato oo ay dad badan oo kale jecel yihiin. Halkii laga bilaabi lahaa dhowr aragti, aad bay u fududahay in la kordhiyo aragtida adoo iibsanaya muuqaalada YouTube. Kanaalada caanka ah ee YouTube waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo la aamini karo oo la aamini karo. Talaabada ugu horeysa ee lagu dhisayo kalsoonida waa in la iibsado aragtida YouTube. Marka kanaalkaaga YouTube loo arko mid la aamini karo, wuxuu soo jiidan doonaa aragtiyo dabiici ah oo badan, jecel, faallooyin, iyo macaamiisha.
Kor u qaad mareegahaaga - Helitaanka aragtiyo badan iyo macaamiishu waa hab fiican oo aad ku heli karto dhagaystayaasha bartilmaameedka ah inay kugu kalsoonaadaan. Haddii aad raadinayso inaad ka faa'iidaysato YouTube si aad u horumariso boggaaga, iibsashada aragtida YouTube waxay kaa caawin kartaa inaad gaadho yoolkan. Ku darista badhan wax ku ool ah CTA (wicitaan ficil) iyo isku xidhka fiidyahaaga ayaa kaa caawin doona inaad toos u macaamiishu u galaan mareegahaaga. Awood-siinta wadaagga warbaahinta bulshada waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa kor u qaadida taraafikada boggaaga.
Ka iibsashada aragtiyaha YouTube ilo lagu kalsoon yahay waxay kaa caawin doontaa inaad beegsato dadka ay u badan tahay inay xiisaynayaan waxa aad bixiso. Dadkani waxay aad ugu dhow yihiin inay booqdaan mareegahaaga oo ay iibsadaan adeeggaaga ama alaabtaada, kordhinta dakhligaaga.
Isku soo wada duuboo, marka aad iibsato aragtiyaha YouTube, waxaad si degdeg ah ula socon kartaa dariiqaaga aad ku gaadhi karto istaraatiijiyadaada YouTube ee sanadka 2022. Tani waxay sidoo kale fasaxi doontaa wakhtigaaga maadaama aanad waqti iyo dadaal badan ku bixin doonin ururinta macaamiil badan iyo kor u qaadida aragtida fiidiyowyada. Waxaad ka faa'iidaysan kartaa wakhtigaaga firaaqada si aad u hagaajiso istaraatiijiyadaada YouTube, oo ay ku jiraan abuurista waxyaabo tayo sare leh, nadiifinta xeeladaha suuqgeynta intarneedka, iyo dhinacyo kale oo hal abuur leh.
Hadda oo aad leedahay fikrado ku saabsan micnaha aragtida YouTube iyo faa'iidooyinka iibsashada aragtiyaha YouTube, tallaabada xigta waa inaad hesho goobta saxda ah ee lagu iibsado aragtida YouTube. Iyada oo goobo badan (ay ku jiraan kuwa khiyaanada leh) oo bixiya aragtida YouTube iyo macaamiisha, waxay noqon kartaa mid adag in la helo goob dhab ah.
Waa kuwan tillaabooyinka la xaqiijiyay ee lagu iibsanayo aragtida YouTube ee ku habboon istaraatiijiyadaada YouTube ee 2022.
Siyaabaha la xaqiijiyay ee lagu iibsan karo aragtida YouTube 2022
Ugaadhsiga aragtida iibiyaha YouTube waxay noqon kartaa waqti-qaadasho iyo caqabad marka aanad hubin waxaad raadinayso. Bixiyaha ku habboon wuxuu bixiyaa adeegyo tayo sare leh, xirmooyin la awoodi karo, habeynta, ilaalinta siyaasadda lacag-celinta, dammaanadda buuxinta, iyo taageerada macaamiisha oo dhammaystiran.
Waa kuwan sifooyinka ugu sarreeya ee lagu qiimeeyo marka la iibsanayo aragtida YouTube:
Qiimaynta iyo dib u eegista - Waxa ay macaamiishu ka sheegaan calaamaddu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan samaynta go'aannada wax iibsiga. Da'da dhijitaalka ah, macaamiishu waxay akhriyaan meel kasta 6 ilaa 11 dib u eegis ka hor inta aysan go'aansan inay la macaamilaan shirkad. Hubi haddii aragtiyaha YouTube-ka iibiyaha uu leeyahay dib u eegis iyo qiimayn wanaagsan oo ku saabsan boggaga qolo saddexaad sida Trustpilot.
Trustpilot waa goobta maamulka ee dib u eegista macaamiisha ee lagu kalsoon yahay oo muujisa dib u eegista dhabta ah ee ganacsiyada macaamiisha. Raadi qiimeynta Trustpilot ee ka sarreeya 4.5 taas oo muujin karta in shirkadu ay tahay mid la aamini karo. Tusaale ahaan, YTPal waxay ku leedahay qiimaynta 4.7 Trustpilot waxaana loo arkaa inay tahay tan ugu fiican, goobta sharciga ah ee lagu gato aragtiyaha, kuwa la jecel yahay, macaamiisha, iyo wax ka badan.
Qorshayaasha - Qiimee bixiyaha aragtida YouTube iyada oo ku saleysan qorshahooda iyo xirmooyinkooda. Haddii aad tahay bilawga leh miisaaniyad xaddidan, hubi haddii goobta ay bixiso xidhmo YouTube-ka bilawga ah oo bilaash ah, oo ay ku jiraan aragtida YouTube iyo macaamiisha bilaashka ah. YTPal waxay siisaa xidhmo bilaasha YouTubers taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku kasbato toban macaamiil laba iyo toban saacadood gudahood.
Xulashada xirmo bilaash ah waa hab fiican oo lagu tijaabiyo tayada badeecadaha iyo adeegyada ay goobta bixiso ka hor inta aadan si buuxda u go'an. Markaad ku qanacdo xawaaraha gudbinta, ka jawaab celinta, iyo tayada adeegga, waxaad u gudbi kartaa iibsashada qorshooyinka kale.
Xirmooyinka kale ee soo jiidashada leh ee qorshaha lacag bixinta waxay ku bilowdaan ugu yaraan $20 bishii. Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad doorato 1000 views ama 100,000 oo aragtiyo leh qorshooyinka lacag bixinta dammaanad qaaday.
Haddii aad rabto dhammaan Xidhmada YouTube oo ay ku jiraan jeceyl, wadaag, macaamiisha, iyo faallooyinka leh aragtiyo, waxaa fiican inaad doorato xirmooyinka aragtida. Tusaale ahaan, xirmada 1000-ka aragti waxa ka mid ah 50 likes, 100 shares, iyo 10 comments. Xirmada 5000 ee aragtida, waxaad ku heli kartaa 400 likes, 2000 shares, iyo 50 comments.
Iibka xirmada aragtida YouTube waa hab fiican oo lagu badbaadiyo lacag markaad helayso tirada aragtiyada, jeceylka, faallooyinka, iyo saamiyada aad rabto.
Kala duwanaanshaha adeegyada - Markaad raadinayso goobta ugu fiican ee lagu iibsado aragtiyaha 2022, qodobka ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo waa haddii bixiyaha uu bixiyo adeegyo kala duwan. Iyadoo laga yaabo inaad u baahato aragtida YouTube, si aad u bilawdo, markaad horumarayso, waxaad u baahan doontaa adeegyo badan oo badan, oo ay ku jiraan
La soco Saacadaha
Share iyo like
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku balaadhiso joogitaankaaga warbaahinta bulshada kanaalada kale sida Twitter, Instagram, Twitch, ama Pinterest. Halkii laga gaari lahaa goobo badan oo mid kasta oo ka mid ah adeegyadan, waa fikrad wanaagsan in la doorto goob bixisa dhammaan adeegyadan hal saqafka hoostiisa ah.
Aragtida dhabta ah iyo kuwa raacsan - Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato markaad iibsanayso aragtiyadu waxay la xidhiidhaa xaqiiqada. Waxaa jira bogag badan oo bixiya bots iyo taageere been abuur ah ama aragtiyo si kor loogu qaado tirakoobkaaga YouTube. Software-ka YouTube, si kastaba ha ahaatee, waxaa loogu talagalay in lagu ogaado oo la tirtiro kuwan raacsan iyo bots-yada been abuurka ah.
Goob la aamini karo oo bixisa adeegyo qaali ah waxay bixin doontaa YouTube jecel, aragtiyo, iyo faallooyinka gaarka ah ee dadka dhabta ah.
Badbaadada iyo sirta - Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga raadiyo goobta iibisa aragtida YouTube waa inay ilaalinayaan sirta. Ku qiimee siyaasada khaaska ah ee goobta ee shabakadooda iyo sida ay u ururiyaan una isticmaalaan macluumaadka gaarka ah. Goobta ugu fiicani kuma waydiin doonto eraygaaga sirta ah marka aad qaadanayso xog ururin, habayn, iyo dhaqamada kaydinta habboon. Waa inay sidoo kale lahaadaan tillaabooyin ammaan oo adag si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo xogtaada wax kala iibsiga ee ka dhanka ah gelitaanka iyo siidaynta aan la ogalayn.
Websaydhku waa inuu sidoo kale sheegaa haddii ay isticmaasho madal isgaarsiineed oo sugan oo SSL ah oo sir ah.
Buuxi dammaanadda - Damaanad-qaadista dib-u-buuxinta waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee la raadinayo marka la iibsanayo aragtida YouTube 2022. Tani waa muhiim sababtoo ah xitaa markaad hesho tirada aragtiyada aad iibsatay, tirinta ayaa hoos ugu dhici karta YouTube sababo kala duwan. Bixiyaha daawashada YouTube ee ku habboon ayaa ku siin doona dammaanad buuxinta si loo hubiyo inaad haysato tirada saxda ah ee daawashada, lacag la'aan.
Xawaaraha gaarsiinta - Markaad iibsatid muuqaallada YouTube, waxaad si dabiici ah filaysaa keenista degdega ah, taas oo markaa ku siinaysa natiijooyin degdeg ah. Doorashada goobta ugu fiican ee lagu gato aragtiyaha YouTube 2022 waxay keenaysaa in la ogaado wakhtigooda soo celinta aragtiyaha. Bixiye wanaagsan wuxuu bilaabi doonaa keenista 24 saacadood gudahood wuxuuna sii wadi doonaa maalin kasta ilaa aragtida bartilmaameedka laga keenayo. Goobaha ugu sarreeya waxay soo bandhigi doonaan aragtiyo caadi ahaan dhowr maalmood gudahood. Haddii aad shaki ka qabtid, la hadal kooxda taageerada macaamiisha si aad u xaqiijiso wakhtiga soo celinta aragtida YouTube.
Goobaha la aamini karo sida YTPal waxay bixiyaan 100 dammaanad gaarsiinta iyo dammaanadda lacag celinta ee ilaalinta dheeraadka ah.
Dalbashada khibrad - Waayo-aragnimada wax iibsiga waxa ay tilmaamaysaa dhammaan habka uu dukaameystuhu ku hawlan yahay, laga bilaabo booqashada goobta ilaa dhamaystirka iibka. Aragtida YouTube goobta iibiyuhu waa inay ahaataa mid sahlan oo lagu dhex socon karo, aan buuq lahayn, oo habaysan. Waa inaad awood u leedahay inaad si degdeg ah u dalbato adoon gujin xiriirin badan ama aadan ugaadhsan badhanka iibka. Laga bilaabo habka diiwaangelinta fudud, baadhitaanka aragtida YouTube qorshooyinka si aad u hubiso, wax walba waa inay ahaadaan kuwo aan dhib lahayn oo degdeg ah.
taageero Customer - Marka laga reebo is-sharraxa is-sharraxa iyo is-dhex-dhexaadiyaha-saaxiibtinimo, goobta ugu habboon ee aragtida YouTube-ka ayaa bixin doonta taageero macaamiil oo dhammaystiran. Tan waxa ku jiri kara qayb su'aalo badan la is weydiiyo oo ka jawaabaya su'aalaha ugu badan, doorashooyin kala duwan oo lagula xidhiidho daryeelka macaamiisha, sida iimaylka ama foomka waydiinta.
Shirkad wax ka qabata waxay caadi ahaan kugu soo noqon doontaa 24 saacadood gudahood ama 72 saacadood gudahood.
siyaasadda Soo celinta - Sida wax kala iibsi kasta oo kale, ka iibsashada aragtida goobta waxa laga yaabaa inay xambaarsan tahay khataro ay ku jiraan adeegyo la'aan ama arrimo tayada badeecada. Goobaha ugu fiican ee lagu iibsado aragtiyada waxay yeelan doonaan siyaasad lacag celin ah oo si cad u qoran oo qeexaysa xaaladaha lacag-celinta la soo celin karo iyo sida macaamiishu u dalban karaan isla.
Marka ay timaado tayada badeecada, inta badan goobaha ayaa kaa doonaya inaad bixiso caddaynta in adeegga la soo iibsaday uusan ahayn sida ku cad sharraxaadda goobta.
Marka laga reebo kuwan, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hubiso haddii goobta ay leedahay siyaasad burinta rukunka. Tani waxay ku siinaysaa xoriyada aad ku kansali karto rukhsadnimadaada marka aanad u baahnayn inaad iibsato aragtiyo ama rukunsad
Tusaale ahaan, YTPals waxay leedahay siyaasad lacag celin ah oo burinta rukunka kaas oo kuu ogolaanaya inaad tirtirto rukunka haddii aadan ku faraxsanayn badeecada ama adeegga. Waxaad heli kartaa lacag celin buuxda oo aad burin kartaa is-diiwaangelintaada adiga oo la xidhiidha daryeelka macaamiisha todobo maalmood gudahooda ee taariikhda lacag bixinta isdiiwaangelinta.
Kor u qaad istiraatiijiyaddaada YouTube 2022 aragtida YouTube
Abuuritaanka fiidiyowyo tayo sare leh ayaa fure u ah soo jiidashada iyo haysashada kuwa raacsan. Sababtoo ah qancinta sare iyo tartanka adag ee YouTube, way ku adagtahay bilowgayaasha inay helaan taageerayaal iyo aragtiyo ku saabsan goobta. Tani waa sababta goobaha aad awoodid iibso aragtida YouTube, jecel yahay, iyo macaamiishu, aad bay caan u yihiin. Haddii aad raadinayso inaad kobciso joogitaankaaga YouTube 2022, qaado tillaabooyinka kor ku taxan si aad u doorato goobta ugu fiican ee lagu iibsado aragtida YouTube iyo kuwa raacsan.
Marka la soo koobo, habka la xaqiijiyay ee lagu iibsan karo aragtida YouTube 2022 waa in la hubiyo in iibiyuhu bixiyo:
Adeeg tayo sare leh
Xirmada bilawga bilaashka ah oo leh xulashooyin lagu cusboonaysiinayo
Adeegyo iyo qorshayaal ballaaran
gaarsiin degdeg ah iyo natiijooyin
Siyaasadda dammaanadda-celinta iyo lacag-celinta
Siyaasadda dib u buuxin
Fudud, interface user-saaxiibtinimo iyo hubi habka
100 boqolkiiba badbaadada iyo sirta
Muuqaalo YouTube oo tayo sare leh oo dhab ah
Heerarka macquulka ah
24 x 7 taageerada macaamiisha
Dib u eegis togan iyo qiimayn
Kuwa ugu fiican ee boggaga iibiya YouTube waxay awood kuu siinayaan inaad kor u qaaddo koritaankaaga dabiiciga ah adiga oo helaya aragtiyo dhab ah, kuwa raacsan, iyo kuwa jecel. Ka tagista shaqada adag ee kobcinta ka-qaybgalka bixiyaha aragtida YouTube waxay kuu oggolaan doontaa inaad diirada saarto dareenkaaga iyo waxa ku jira.
Muuqaalka YouTube-ka ayaa lagu daray gaadhigaaga.